FINOANA SILAMO AO MAHAJANGA : Hankalaza ny "Mahoulidy" ny sabotsy 02 desambra izao
Ambohipihaonan’ireo mpino silamo manerana ny lafivalon’ny Nosy sy ireo havany avy atsy Kaomoro ,ny sabotsy 02 desambra izao. 1er décembre 2017
Matipaika ny lamina enti-manatanteraka izany, izay manomboka amin’ny 1ora sy sasany hiainga eny amin’ny moskey zoma, ao Mahabibo ny filaharambe hamakivaky ny tanàna ary hihazo ny tranoben’ny kolontsaina etsy Mangarivotra.
Avy eo dia hanomboka ny vavaka sy kabary hifandimbiasan’ireo manankaja voaasa amin’izany sy ireo Fondy hampahafantatra ny tantaran’ity mpaminany Mohamad ity. Hofaranana amin’ny fiaraha-misakafo hanipitoloha ny "mahoulidy" avy eo araka ny nambaran’i Oustazy Badroudine sy El-haad, izay mpitarika ity finoana ity eto Mahajanga. Tanjona araka ny nambaran’ireto farany dia ny ho fampiraisana ny antokom-pinoana silamo tsy mitovy firehana sy ny fiarahamonina amin’ny ankapobeny mihitsy izao atao izao. Satria tokoa dia natokana ho an’ny rehetra ny nahatongavan’io mpaminany io fony izy teraka fa tsy ho an’ny silamo mivakivaky. Na eo aza izany dia mbola niantso ireo mpino na kristianina ihany koa ireto mpitarika ireto mba hifanotrona amin’io andron’ny sabotsy 02 desambra io amin’ny maha iray ny Tompo zanahary.
Tsy anavahana araka izany ho an’ny madresad na ireo sekoly koranika rehetra sy ireo fikambanana tsotra tsy ao anatin’io finoana silamo io ny fotoana fa natao ho an’ny rehetra mihitsy. Hisy koa ny vavaka fangataham-pitahiana ho an’ireo rehetra mila izany ny andron’ity mahoulidy atao ity hoy hatrany ny mpikarakara.